အခွံလဲခြင်း | Layma's World
Posted on January 20, 2008 by layma
Filed under: Pieces |
« ပထမဆုံးလမှာ စိန်ခေါ်ကြသူများ.. Barcelona Pavilion »
jerry, on January 20, 2008 at 6:59 pm said:
အရင်အိမ်နဲ့ အတော်ဆင်သွားပြီ ။
ဘန်နာကလေးက လည်း ဂွတ်ထ ။
ရေးပေတော့ ….. စာတွေ တစ်သီကြီး ။ နော်ဗျ ။ 🙂
မောင်မျိုး, on January 20, 2008 at 9:45 pm said:
မျက်စေ့ထဲမှာ ရှင်းသွားတာပဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘလော့လေ ပါ ကြိုးစားပေါ့ ဘလော့နဲ့စာနဲ လိုက်အောင် ( ဆရာကြီးလေသံနဲ့ပြောကြည့်တာ )
chitlaypyay, on January 21, 2008 at 3:00 am said:
ခေါင်မိုး အသစ်ကလေးနဲ့ လှနေတယ်၊ အင်းပေါ့လေ လုပ်ပါလုပ်ပါ သူတို့ က ဗိသုကာကြီးတွေ ဆိုတော့ အိမ် တွေ တစ်လုံးပြီး တလုံးပြောင်းလိုက်၊ အိမ်ခေါင်မိုး အသစ် ခဏခဏ လဲလိုက် နဲ့ လုပ်နိုင်တာပေါ့၊ ကိုယ်တို့များ ကြတော့ မဒါဝတ်ပဲ ဖြစ်နေတာ၊ အိမ်ခေါင်မိုး အသစ် လဲပွဲ မုန့်ကျွေးရမယ်၊ နော် ဒါပဲ၊
nyo, on January 21, 2008 at 6:59 am said:
အိမ်သစ်လေးက လှမှလှ ပဲ.. အိမ်သစ်တက်တာမုန့်ကျွေးပါဗျို့
chaos, on January 21, 2008 at 9:35 am said:
အပေါ်ကသုံးယောက်က ချုမွန်ရယ် ချစ်မရယ် ခေးရော့စ်ရယ်လားဟင်
မျှားပြာ, on January 21, 2008 at 6:58 pm said:
ဒီအိမ်လေးကို သဘောကျတယ် ဟုတ်တယ်နော်
nu-san, on January 21, 2008 at 8:10 pm said:
အိမ်မဆောက်ရသေးခင် လက်စွမ်းတွေ ပြနေတာလား လေးမရေ.. အခု banner လေးနဲ့ အိမ်သစ်ကို အပြတ်ရွိုင်းထားတာ လှပါ့နော်.. ဟွန်း.. နာလိုတော့ဘူး..
လေးမ blog ထဲ ၀င်ဝင်ချင်း မျက်စိကို အေးသွားတာပဲ.. လှတယ်.. 🙂
ရွှေရောင်ကောင်းကင်, on January 22, 2008 at 5:11 am said:
တန်းပလိပ်က အမိုက်စားပဲ .. 🙂
သဇင်ဏီ, on January 22, 2008 at 8:27 am said:
Disney နဲ့မိုက်နေတယ်.. နာလိုဘူးကွာ 😛
tzm, on January 22, 2008 at 1:06 pm said:
very beautiful template, ma ma lay.
btw, i can’t write burmese in comment.. what wrong with me…
tzm, on January 24, 2008 at 9:43 am said:
ရပြီ မမလေးရေ… မြန်မာလိုပြန်ရိုက်လို့ ရပြီ…. ကျွန်တော့ရဲ့ firefox setting မှာ မှားနေလို့
layma, on January 27, 2008 at 7:19 am said:
>မောင်မျိုး… ဘလော့ဂ်နဲ့ စာနဲ့ လိုက်အောင် ဘယ်လိုရေးရမလဲ..ဆရာပဲ..သင်ပေးတော့..။
>မမလေပြေ…မောင်မျိုးမွေးနေ့က မုန့်တွေ အရမ်းမိုက်တယ်..အဲဒီမှာ သွားစားလိုက်နော်…။
>မျှားပြာ…ပြာယာခတ်လည်း…အဟောင်းကို တလည်လည် ဖြစ်နေတယ်ပေါ့…။
>မနုစံ…လေးမ လက်စွမ်းမပြဘူး..။ ကို အတာ လုပ်ပေးတာ…။ ဟီး..။
>သဇင်ဏီ…သွပ်လို ကောင်ကောင်လေးနဲ့ နေကြည့်တာလေ..။
>ကိုသန့် …. လန့်သွားတာပဲ…တော်ပါသေးရဲ့…။
Tabeddyaeroge, on April 7, 2008 at 1:35 am said: